Waradiin Badan ayaa Weli Ku Qasban in ay Caruurtood ka tagaan oo Dalkood sharci kasoo dalbadaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waradiin Badan ayaa Weli Ku Qasban in ay Caruurtood ka tagaan oo Dalkood sharci kasoo dalbadaan
Publicerat onsdag 8 februari 2012 kl 09.47
Waarid badan ayaa weli lagu qasbaa in ay caruurtooda uga tagaan Iswedhen oo ay dalkoodii dib ugu noqdaa sidii ay ay sharci deganaasho halkaa uga soo dalbadaan, inkastoo sharciga la badalay 2010 si loo baajiyo qoyska kala maqnaadaan.
qofku hadii ehladiiso dagan yahiin dalkaan oo uuna rabo in uu la dago waan in dalkiisa sharciga deganaashaha ka soo dalbadaa, lakiin xeerkaas ayaa isbadel lagu sameeyey sidii looga hortagi lahaa in qofkii caruurtiisa iyo reerkiisa la dagan Isweedhen och ay cadahay in loo ogalaanayo sharciga deganaasho in aan lagalin socdaal dib u noqosho aan loo baahnayn oo la kala firdhin qoyska.
Lakiin isbaldal sharciyeedkaan ayaa qosaynin dhamaan qoyska oo dhan. Tusaale caruurta ayaan dadka lagu dalbankaro sharciga deganaasho markoo qofko halkaan ku sugan yahay. Mar hadii uusan sharcigaan qosaynin caruurta taa micnaheedo tahay waxaan dhiblahay in qoysku kala maqnaado dhoorbilood taasna waa waxaan ka talinaynin wanaaga caruurta, ayuu yeri Fredrik Malmberg oo qaabilsan arimaha aruurta(Barnombudsmannen).
Tiro sax caruurta ay arintaan ma hayaan laanta socdaalka ee Migrationsverket.